KDE Plasma 5.15 dia mandray ny fanavaozana ny fikojakojana voalohany | Avy amin'ny Linux
KDE Plasma 5.15 dia mandray ny fanavaozana ny fikojakojana voalohany
Ny Tetikasa KDE androany dia nandefa ny fanavaozana ny fikojakojana voalohany ho an'ny andiany KDE Plasma 5.15 farany manamboatra bug sy olana isan-karazany notaterin'ny mpampiasa.
Ny KDE Plasma 5.15 dia navotsotra herinandro lasa izay tamin'ny 12 febla niaraka tamin'ny fiasa sy fanatsarana vaovao, ao anatin'izany ny mpitantana fonosana nohatsaraina, ny fampidirana tsara kokoa amin'ny haitao sy ny fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo toa ny Firefox, ny fanatsarana ny interface, ny safidin'ny tambajotram-baovao ary ny sary namboarina.
Ity fanavaozana ny fikojakojana ity, KDE Plasma 5.15.1, tonga hanamboatra lesoka isan-karazany izay hahatonga ny traikefa ho marin-toerana sy azo itokisana. Anisan'ireo hevi-dehibe ananantsika ny famerenana amin'ny laoniny ny fotoam-pivoriana, ny fanatsarana ao amin'ny menio Kickoff hamerenana ny pejy Favorites, hahita fanatsarana ary ny fanohanana tsaratsara kokoa ny tantara an-tsary.
KDE Plasma 5.15.2 Tonga tamin'ny 26 Febroary
Anisan'ireo singa hafa nohavaozina tao amin'ny KDE Plasma 5.15.1 azontsika atao ny manonona ny mpitantana fonosana Plasma Discover, fanitarana maro samihafa ho an'ny Plasma toa ny Time and Comic, ny hitsin-dàlana amin'ny KDE, ny fisehoan-javatra vaovao ao amin'ny KWin manager manager, Powerdevil power manager, izay tafiditra ao ny mpitantana ny fivoriana, ankoatry ny singa hafa amin'ny Plasma Workspace sy ny Plasma Desktop.
Ny lisitr'ireo fanovana feno dia misy ao amin'ny Ity rohy ity Ho an'ny mpampiasa rehetra, ny KDE Plasma 5.15.1 dia ho hita avy amin'ny tahiry ofisialy amin'ny fizarana Linux tianao indrindra tsy ho ela. Ny fanavaozana ny fikojakojana faharoa, Ny KDE Plasma 5.15.2 dia ho tonga haingana amin'ny herinandro ambony miaraka amin'ny fanatsarana bebe kokoa aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » KDE Plasma 5.15 dia mandray ny fanavaozana ny fikojakojana voalohany
Tonga ny DigiKam 6.0.0 ary ireto ny vaovaony
Ny Fedora Atomic Host izao dia ho lasa Fedora Core OS